धानमा कालोपोके ! spacekhabar
धानमा कालोपोके !
स्पेसखबर पर्वत, ११ कात्तिक
कुस्मा नगरपालिका ९, कटुवाचौपारीका हरि अधिकारीलाई अहिले हाइब्रिड जातको धान लगाएकामा पछुतो छ । थोरै जमिनमा पनि धेरै उत्पादन हुने आशामा वर्णशङ्कर जातको धान लगाएका उनको धानका बालामा कालो पोके नामक ढुसीको प्रकोप फैलिएको छ ।
उनले भने, “धेरै फल्छ भनेर छिमेकीका अरूले झै मैले पनि अघिल्लो वर्षदेखि नै हाइब्रिड जातको बीउ लगाउँदै आएको थिएँ तर अहिले धानको बालामा कालो पोके मात्र छ ।” कुटवाचौपारीका हरिजस्तै हाइब्रिड जातको धान लगाउँदै आएका जिल्लाका धेरै कृषक निराश छन् ।
धान थन्क्याउने बेला हुनै लाग्दा यस्तो प्रकोप बढेपछि समस्या भएको फलेवास नगरपालिकाका कृषक विष्णुप्रसाद उपाध्यायले बताए । जिल्लाका विभिन्न स्थानका कृषकले धानमा संक्रमण देखिएको भन्दै जानकारी गराएकाले कालो पोकोको सङ्क्रमण जिल्लाभर नै रहेको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
उक्त नगरपालिकाको कटुवाचौपारी, वितलव, पकुवा, चुवा, आर्थरका साथै फलेवास नगरपालिकाको मुडिकुवा, देवीस्थान, शङ्करपोखरी जलजला गाउँपालिकाको मल्लाज, खनियाघाट, लेकफाँट मोदी गाउँपालिकाको तिलाहार, डिमुवा, गिजानलगायत अन्य गाउँपालिकामा पनि कालो पोकेको सङ्क्रमण देखिएको छ ।
कृषि प्राविधिकका अनुसार यस वर्ष सबैजसो जातका धानमा कालो पोकेको सङ्क्रमण देखिए पनि यसबाट बढी असर परेको धानको जात चाँही वर्णशङ्कर हो । कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख वासुदेव रेग्मीले आफूले कृषकको खेतमै गएर कालो पोकेको प्रकोपबारे अवलोकन गरेको बताए । “कृषकलाई मैले पटकपटक हाइब्रिड जातको पछाडि दगुर्नु राम्रो होइन, यहाँको वातावरणले त्यो जातलाई असर गर्छ भन्दै आएको थिएँ ।” उनले भने । “हाइब्रिडमध्येको वर्णशङ्कर जातमा सङ्क्रमण बढी देखिएको छ ।
हाइब्रिड जातको धानको लागि आवश्यक पर्ने माटोको गुण, तापक्रम र अन्य वातावरण पर्वत जिल्लामा नभएको बताउँदै उनले आधुनिक तरिकाले स्थानीय बीउलाई नै मुख्य बालीका रूपमा लिन सुझाए । हाइब्रिड जातले केही समय राम्रै उत्पादन भएको जस्तो देखिए पनि त्यसका लागि चाहिने वातावरण नमिल्दा कृषकलाई ठूलो मार पर्ने प्रमुख रेग्मीको भनाइ थियो ।
प्राय: यूएस ३१२, एआरआई जेडई ६४४४, राधा डीवाईलगायत उन्नत जातमा पनि कालो पोकेको सङ्क्रमण देखिएको उक्त कार्यालयले तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । स्थानीय रूपमा पाइने जेठो बुढो, पहेँले, एक्ले, गुडुरा, कनजिरा, विरम्फुलेलगायत जातमा भने यस्तो समस्या देखिएको छैन ।
प्राविधिकका अनुसार स्थानीय हावापानी, माटो र तापमान सहन नसक्ने भएकाले उन्नत जातको धानमा यो रोग बढी मात्रामा लाग्ने गरेको छ । रात र दिनको तापक्रममा धेरै फरक हुने, पसाउने बेलामा वर्षा भइरहने र रासायनिक मलको बढी प्रयोगलगायत कारण यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । कालो पोकेबाट सङ्क्रमित धान र पराल दुवै विषाक्त हुने भएकाले यस्तो धानको चामल खाएमा ‘फुड पोइजन’, झाडाबान्ता, पेट दुख्नेजस्ता समस्या हुनाका साथै पराल, ढुटो र कनिका खुवाएका पशुमा पनि पेटसम्बन्धी समस्या देखिने पशु चिकित्सक विमल पौडेलले बताए । -रासस
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ११, २०७६, ०१:४३:००
कोरोना भाइरसको प्रभाव सुनदेखि लसुनसम्म
सुनको मूल्य तोलाको ७८ हजार नाघ्यो
नेप्से परिसूचक ३० अङ्कले वृद्धि
सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान, ताेलाकाे ७७ हजार नाघ्याे
पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर दुई रूपैयाँले घट्यो
पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित ६ कम्पनी कालोसूचिमा